Albendazole bu ihe ndi ozo nke ndi benzimidazole-ndi ozo site na otutu ikpuru na uzo di elu karia ndi okenye nke imeju.
Butafosfan egosiri maka mmebi site na oke ma ọ bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke na-esi na nri na-ezighi ezi, njikwa ezughị ezu ma ọ bụ ọrịa.
Egosiri na ọgwụgwọ nke dịgasị iche iche nke ọrịa nke nje malitere. Karịsịa irè na ọrịa na-efe efe, urogenital na alimentary traktị.
Procaine Penicillin G Dihydrostreptomycin Sulphate Ọgwụ
A na-egosi ọgwụ ogwu Penstrep maka ojiji na ehi, ịnyịnya, ezì na atụrụ na-agwọ ọrịa nke nje nwere ike ibute gụnyere: erysipelas; otube / sonye ọrịa; akụkụ okuku ume na tract ọrịa gụnyere oyi baa na atrophic rhinitis; ọrịa listeriosis; meningitis; septicemia; toxaemia metụtara Salmonella spp., Salmonellosis.
Ivermectin injection bụ ọgwụ nje iji gbuo ma chịkwaa eelworm, nyocha na acarus.
Ngwaahịa a gosiri megide eriri afọ na akụkụ okuku ume na-efe efe mere site Micro-ntule na-eche enrofloxacin.